(Hadhwanaagnews) Thursday, November 08, 2018 08:02:45
Waa dhulkii Dib u dhistay dawladnimada qaranimada iyo haykalka iyagoona sammaystay lacag barlamaan Calan iyo wax uwada Gaara.
Somaliland waa dhul baaxadleh oo ka kooban lowyo addo ilaa laasqoray waa dhulkii uu gummaytihii engriisku gummeysi ahaan u joogi jiray ee LA odhan engriiskii weynaa.
Waa dhulkii ay wakhtiyo wakhtiyada kamidii ka tooseen kooxii kacdoonka waday ee gummaysig diidka ahaa ee ay daraawiishtu hoggaa ka u hayeen kuwaas oo muddo labaataneeyo sanno halgan qadhaadh kula jiray engriiskii.
Waa dhulkii ay adal impire ka jiri jirtay iyo boqortooyooyinka toddobada ahaa waana dhulkii lixdankii Calan kataagay arladii kaas oo ugu horreeyeen midowgii soomaaliyeed iyo isku keenkii shantii soomaaliyeed.
Waa dhulkii Dib u dhistay dawladnimada qaranimada iyo haykalka iyagoona sammaystay lacag barlamaan Calan iyo
wax uwada Gaara.
Waa dhul ay ummada soomaaliyeed wax kabaran karaa oo horumuud u ah eeggadan
Waxa lasameeyey dooroshooyin kuwaas oo isku badbadaleen mud 27sanno afar madaxweyne .
Waa dhul waxbadan qabsaday waxbadanina u dhimanyihiin